Metamask: danho nedanho gwara kune yakanakisa chikwama cheDeFi - Cazoo
musha » musha » Metamask: danho nedanho gwara kune yakanakisa chikwama cheDeFi
Tag: DPP, Dapps, Defi, Metamask, Binance Smart Cheni Network, Ethereum network, chikwama, Rairira kurima
Tenda kana kwete, kune zvakawanda zvakawanda kune cryptocurrency pane kungoisa mari.
Kune mazana emashandisirwo akaisirwa mukati akavakirwa pamusoro pegumi nemaviri blockchain: idzi DPP (Zvakatemerwa Zvakatemerwa Zvishandiso) zvinokutendera kuti uite zvinhu senge gamuchira zvikwereti e kuchinjana cryptocurrencies ndisina kumbovimba nemubatanidzi wepakati sebhangi kana kuchinjana kwe crypto. Isu tinoona kuti kucheka ava vamiririri hakuite chete kuti zviitiko zvive zvakachengeteka uye zviite zvakanaka, asi zvakare zvinoshandura kuita purofiti yakakura yemushandisi wekupedzisira.
Pane akawanda chikwereti DAPPs iwe unogona kuwana zvakanaka pamusoro pegumi muzana muzana mubhadharo pagore rako rekuchengeta mari yemari uye zvimwe goho yeald zvekurima maprotocol anotendera iwe kuti utore pamusoro pe10% pagore. Asi inofanira kuvimbwa nayo here?
Kuwana kune ino nyika nyowani yemari kunoda zambuko, zambuko rinotitora kuburikidza ne internet ndima kune internet kudzikiswa uko kunowanikwa izvi zvinoshandiswa. Imwe yeakanakisa "mabhiriji" pamusika ndeye Metamask.
Metamask iri browser rekuwedzera iyo inoshanda sekiyi chete kiyi iwe yaunoda kuti upinde munzvimbo ino isinganzwisisike yemari yakatemerwa mari. Ichave yako bhiriji yekudyidzana nayo dapps pane iyo Ethereum uye Binance Smart Chain network.
Zvino nditeerere zvakanaka: kuisa mari yako kune njodzi. Pakarepo ipapo, uye zvese zvakanaka. Ipapo zvaenda uye kunzwa kwacho kunotyisa. Chenjerera. Ini handisi chipangamazano wezvemari, ini handisi kukukurudzira kuti uise mari yako. Mari inzvimbo inofanirwa kusiirwa kune avo vakadzidza uye kune avo vanoziva kufamba mukati mayo. Kana iwe uchitya, ndiwo manzwiro akanaka ekutarisana nazvo. Usavimba mutorwa anonyorera cazoo paCazoo, usavimba vhidhiyo yeYouTube kana TikTok. Ita zvako pachako kushingairira kwakakodzera! Ita yako tsvagiridzo, edza kuona kuti chii chakanaka uye chii chisiri.
Ini ndinotaura izvi nguva dzese, asi panguva ino zvakanyanya kukosha kuti ndizviratidze nekuti ndichave ndiri kutenga akasiyana madhijitari mukati megwara rino kushandisa Metamask, uye kutenga uku hakufanirwe kutorwa sekutsigirwa. Uyu mugodhi unongoreva kukuratidza zvaunotarisira kana uchishandisa Metamask.
Kana ino iri nguva yako yekutanga kuverenga ini, ndiri kufara kuti iwe uripano. Kana uchifarira nyaya iyi mumaonero angu uchafara. Kana iwe usina hanya, pamwe hausi kutomboverenga iyi mitsara. Pano paCazoo ndinonyora manotsi neruzivo rwandinowana online pamhepo yepasirese nyika inova iyo nyika yemari yemadhora… mumaonero angu ichave iri chikamu chikuru chehupenyu hwedu mune ramangwana. Zvakanaka gadzirira.
Kana iwe uri kushamisika kuti chii Metamask, ngatirege kutambisa nguva.
Chii chinonzi Metamask uye chinoshanda sei?
Metamask ndechimwe chezvishandiso zvekushandisa zvaunogona kushandisa kuwana zvakatemerwa kunyorera, mawebhusaiti akasarudzika, uye mamwe marongero akavakirwa pane cryptocurrency blockchains, kunyanya mukati meiyo Ethereum network.
Pamberi peMetamask iwe waifanira kupa zvakavanzika makiyi kuchikwama chako (kune yako cryptocurrency chikwama) kuti udyidzane nema dapps .. yaive tsika ine njodzi zvakanyanya! Metamask inokutendera kuti uwirirane nemaapps, uchikumbira mvumo yekuwana mari muhomwe yako uye kunyange kuishandisa, usina kana kumbovapa kiyi yako yakavanzika. Epochal yekuchinja nzvimbo mu crypto nzvimbo!
Metamask yakavambwa nemugadziri weConsensys Aaron Davis muna2015.
Anogadzira Consensys, Aaron Davis
Kana iwe usingazvizive, Consensys ikambani yeAmerican blockchain tekinoroji iri muSwitzerland. Iyo interface yavakavaka kuti vataure neiyo Ethereum network, Metamask, ingori imwe yezvishandiso zvakawanda zvakavakwa neConsensys, iyo yakatanga zviri pamutemo Metamask muna Chikunguru 2016.
Kubva panguva iyoyo, iyo Metamask browser yekuwedzera yave nemamirioni anopfuura maviri kurodha pasi, uye iyo metamask nhare mbozha yakatangwa munaGunyana 2 ine inopfuura hafu yavo - miriyoni imwe kurodha pasi paGoogle Play Chitoro. Kubva Metamask ndeye mahara uye zvakare yakavhurwa sosi, Consensys inoita sei mari?
Sekureva kweye reddit post ya2018, Metamask inowana kudzoka kwayo kubva pachokwadi chekuti zvimwe zvishandiso uye mapurojekiti akavakwa neConsensys iyo inoburitsa purofiti, zvisinei zvakadaro vangangoita vatengesi vemari veMetamask makomisheni eEthereum akatenga. zvakananga kuburikidza neyekuwedzera browser uye iyo Metamask makomisheni. Zvinoenderana nezvakataurwa pamusoro pekushandurwa sevhisi yakatangwa muna Gumiguru 2020, Metamask iri kuunganidza pamusoro pe $ XNUMX mumabhadhariro ekuchinjana pazuva…
Kana uchinditevera nhanho nhanho, ita shuwa kuti urikushandisa bhurawuza inotsigira Metamask yakadai seGoogle Chrome, Brave, Firefox kana Microsoft Edge. Ndiri kushandisa Google Chrome.
Metamask akatsigira mabhurawuza. Kwayaka: metamask.io
Nhanho yekutanga mukushandisa Metamask ndeyekuodha pasi yekuwedzera browser, uye nzira yakanakisa yekuita izvi ndeye webhusaiti ye metamask.io. Kunyanya nekuti ZISO !!! Pane zvakawanda zvekunyepedzera Metamask extensions inomhanya. Uyezve ita shuwa kuti url paunenge uri unoti metamask.io.
Isa Metamask kubva metamask.io
Nekudzvanya bhatani rekuisa, Metamask inokuendesa iwe zvakananga kuchitoro chewebhu che Chrome kwaunogona kuwedzera kuwedzerwa. Kamwe kuwedzeredzwa kwaiswa, iyo system inokudzoreredza iwe kuMetamask yekumisikidza peji. Inguva yeku gadzira chikwama.
Parizvino tinomira pano. Ini ndinoenderera iyi dzidziso yemashandisiro eMetamask mukati memazuva mashoma.
Nyaya yapfuuraMaitiro ekupa kurima neLiquid Swap pane Binance
Nyaya inoteveraChii chinonzi Binance Smart Chain, uye inosangana sei neMetamask